PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - Udele ukudlala kwiChampions League osejoyine AmaZulu
Udele ukudlala kwiChampions League osejoyine AmaZulu
SISHIYE abaphathi beCaps United bephithene amakhanda isiqongqwane sompetha beZimbabwe Premier Soccer League, uStephen Makatuka, siqoma ukujoyina AmaZulu kunokuyodlala kwiCaf Champions League.
Exoxa neSolezwe ngeSonto kwenye yezinkundla ezingaphandle kwaseMoses Mabhida, uMakatuka (29) obengukaputeni weCaps nongumdlali wasemuva, uthe: “Ukuhamba kwami kwiCaps kushiye abalandeli nabaphathi behlukene phakathi. Kukhona abebethi angingavinjwa ngoba ukuzodlala eNingizimu Afrika kuyigxathu eliya phambili.
“Abanye bebethi angingavunyelwa ngoba basangidinga ekutheni ngihole iqembu nakwiChampions League.
“Ubufakazi bokuthi abaphathi bebengathandi ngishiye iqembu bangibhalise njengomunye wabadlali abazodlala kwiChampions League, ekubeni bebazi kahle ukuthi angisenayo inkontileka nabo.”
“Lokhu kukhomba ukuthi bebethembele kakhulu kimina.’’
Uthe ngendlela amukelwe ngayo kuMaZulu ngosuku lokuqala lokhu kumembulele elinye ikhasi ngeqembu loSuthu nathi ubone ungekho umehluko nalapho ebedlala khona kwiCaps United.
“Manje okumqoka ukuqinisekisa ukuthi ngifaka igxalaba ekutheni sifukule iqembu libuyele esigabeni esikhulu okungezinye zezizathu engizizele lapha eNingizimu Afrika,”kusho uMakatuka.
Khona manjalo imenenja jikelele yoSuthu uLunga Sokhela, ikuqinisekisile ukuthi sebesayine isivumelwano sokubambisa nomdlali wasenkabeni yenkundla kwiMbombela FC uSiyethemba Mnguni.
Ngokusho kukaSokhela, nakuba bebethanda ukuthi lo mdlali bamthole manje kodwa ngenxa yokuthi abeMbombela bathe bayamdinga ngakho bazolinda kuze kuphele isizini ngoba abazimisele ukudala ubutha obuzodunga ubudlelwano babo.
“Ayikho into esingayenza uma abaphathi beMbombela bethi basamdinga umdlali kuze kuphele isizini.
“Nathi asifuni ukudunga ubudlelwano bethu nabo ngoba lokho akwakhi futhi ngeke kusiyise ndawo.
“Siyethemba ukuthi uzokwazi ukuziphatha, ahloniphe yonke imigomo nesivumelwano anaso neqembu kuze kuphele isizini.
“UThamsanqa Teyise, ngesikhathi esesayine isivumelwano sesibambiso neSuperSport United wakwazi ukuziphatha kahle kuMaZulu kwaze kwaphela isizini ngaphandle kokusinikeza inkinga. Naye angakwenza lokho ukuze akhombise ukuthi usevuthiwe ngokwanele,”kusho uSokhela.
Sisekuzona ezaMaZulu, leli phephandaba liphinde lahabula ukuthi leli qembu seliphinde lehlukana nobengumgadli walo uSphesihle Nzimande.
UNzimande (26), usayine kuMaZulu ngokuqala kwesizini ephuma kwiPolokwane City ayekade eyisizile eyishayela igoli elenza yakhuphukela esigabeni sePremiership ngo-2013.
Ngokuthola ngomthombo, uNzimande utholwe enecala lokungaziphathi kahle nokulahlekisa iqembu ngenhloso yokufihla iqiniso ngesikhathi evele phambi kwesigcawu seqembu esiqondisa ubugwegwe.
Iqembu lithe lizokhipha isitatimende kusasa ngokuhamba kukaNzimande.